beshiya isiminyaminya nesiphithiphithi sasemadolobheni ezahlukene ukuchitha amaholide abo: eyodwa esifisa kolwandle efudumele, elinye - okuya ezindaweni zamaholide, abanye nje ukuhlakulela iziza zabo engadini. Kodwa kukhona esinye isigaba sabantu emangalisayo - vagrants, abahambi umane - abangaphucukile. Zimelela lonke nyaka sondela kanjani ndawonye bayodlula emizileni ezingakaze zifinyelelwe, ufunde izimfihlo zendalo, isigqoko ubuhle bayo, ukuba anqobe emifuleni zasendle futhi entabeni maqembu. Futhi ngaleso sikhathi kuqhubeke, sama nsé snap irowu etendeni ethokomele liyokhala iculo nge isiginci, ukudonsa umusi umlilo ...
Ezindaweni eziningi kuneminyaka eRussia, lapho umuntu ayengathola khona hamba uyokwenza i romance ezinjalo. Futhi omunye wabo - iChibi iBaikal. Ngisho iholidi emfushane iChibi iBaikal babeyizidlova ukukhumbula. Leli chibi elihle kunoma iyiphi inkathi. ihlobo iDemo iBaikal edonsela emangalisayo ukudoba, ukubhukuda, ekwindla imibala iBaikal ogwini watercolors elikhanyayo. Lokho kuwa lapha kufika ngenkathi evumayo kubathandi ubuhle - bezithombe. IBaikal ebusika iyipharadesi esiqinile skiers, abathandi ukudoba ice futhi inja ledding.
Ngaphesheya echibini osebeni naseziqhingini zase ziningi izivakashi izindawo, amahhotela, zokudlala, eholidini iChibi iBaikal kodwa enonya engengaphansi ezikhangayo. Ngempela-ke ungakwazi ukuhlola kuphela labo abazimisele ukuphonsa ithawula okungenani okwesikhashana izinzuzo impucuko sibe munye kanye nemvelo. Sandy Bay ulinde nje kulabo Hermits, ama-philosophers, ukuzigcina kubo kuthule futhi kuthule kuthé cwaka. Kukhona ngisho isikhathi sibonakala ayeke. A Olkhon esiqhingini ukunikeza ukudoba kakhulu futhi kusimangaze ukugcina indawo imvelo acwebile.
Yebo, lonke ku iBaikal Savages elingenalo eningi lula, kodwa kubiza kancane. Kuyinto kudingekile kuphela kusengaphambili eyolanda nemizila ezithakazelisayo, ukujwayelana esimisweni ezokuthutha zendawo, isitoko amabalazwe eningiliziwe endaweni, kanye itende ezinhle, ama-sleeping bag, zokudoba, impahla edingekayo futhi sokudla. Yiqiniso, le ndlela alulona olwawo wonke umuntu, akuwona wonke umuntu ongase akwazi ezinsukwini ezimbalwa ukugqoka umthwalo abalulekile emahlombe akhe. Uma ungomunye nje labo, ngeke asondele yokuhlala yangasese. Amanani ishibhile kuka ehhotela, futhi isilwane noma inyoni ikwazi namanje behlise. Ukuze imali encane ungaya ibe real laseSiberia umusi okugeza, exuding ongenakuqhathaniswa zikaphayini nephunga. By endleleni, uma ngamaholidi ngisho iphathwa kuqhathaniswa elishibhile ku iBaikal 2013 enonya, ekwindla nasebusika amanani namanje aphansi kakhulu.
Umkhakha wangasese iBaikal amadolobha beyokwamukela abahambi: ke Listvyanka nemvelo awo amakhulu, Goloustnoye esikhulu ne lika heady zasehlathini, Arshan ephulukisa imithombo yamanzi amtoti. Abantu bendawo zinhle kakhulu nezivakashi, izivakashi ngabo - umthombo ezinhle engenayo. Ngikholwe, uzothola uzokhunjulwa eholidini iChibi iBaikal, ukunqoba amanani kuleli yinto emnandi ababengayilindele.
Wonke umuntu ekhetha uhambo ngokusebenzisa abezindaba kanye, yebo, ngoba umphefumulo. Ngalo mqondo, eholidini iChibi iBaikal Savages efanelekayo ngazo zonke izindlela. IBaikal - real pearl laseSiberia, lwenza Ongoti yayo exotic kweqiniso ubuhle ezimangelengele ukuthi bazimisele ukuza emuva ngokuphindaphindiwe futhi ukufunda imizila untrodden ngaphezulu.
Lesi sivumelwano ukuthula (eCrimea): izici, ezikhangayo nokuzijabulisa
Kapustin Yar (esifundeni Astrakhan): umlando landfill
Loan isevisi izimali, noma ukuthi kubiza malini ukuthatha ngesikweletu
Ukuze uthole ukwaziswa mayelana nendlela yokuphatha emphinjeni ekhaya
Uphi lapho ungathola khona amaphethini alula kakhulu wokunquma? Ukudayiswa kwezimpahla zokuqala ezingenalutho
"Abrau-Durso" - champagne. champagne Pink "Abrau-Durso". "Abrau-Durso": intengo, ukubuyekezwa
Uba kanjani umphefumulo inkampani: izici namathiphu